नेपालमा ८० प्रतिशत बजार हिस्सा हाम्रो छ: ऋतुमोहन शर्माको अन्तर्वार्ता
5:22 pm, मंगलबार, मंसिर २५, २०७५
विगत ५५ वर्षदेखि ग्यारेज इक्यूपमेन्ट उत्पादन गर्दैआएको एटस एलजी भारतीय बजारमा निकै चर्चित कम्पनी हो । नेपाली बजारमा पनि निकै लामो समयदेखि हिटको प्रालिले बिक्री–वितरण गर्दैआएको एटस एलजीका उत्पादनले थुप्रै ग्यारेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली बजारमा आफ्नो ब्रान्डको उपस्थितिलगायतका विषयमा कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय सेल्स हेर्ने सिनियर मेनेजर रितुमोहन शर्मासँग मेरोअटोले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
ग्यारेज इक्यूपमेन्टमा एटस एलजी निकै चर्चित नाम बन्दै गएको छ । कम्पनीको उपस्थिति र बजार विस्तार कस्तो रहेको छ ?
मुख्यतया हामी अटोमोवाइल सेक्टरसँग जोडिएको ग्यारेजमा प्रयोग हुने इक्यूपमेन्ट निर्माण गर्ने कम्पनी हौं । गाडीको सर्भिस र वासिङ्गमा प्रयोग हुने औजारहरू हामी उत्पादन गर्छौं । यसलाई नेपाली बजारमा विगत ३५ वर्षदेखि हिट्कोले बिक्री–वितरण गर्दैआएको छ ।
अहिले वार्षिक १०० भन्दा बढी ग्यारेज नेपालमा खुलिरहेको छ । त्यसमा करिब ८० प्रतिशत बजार हिस्सा हाम्रो रहेको छ ।
नेपालका सबै स्थान हाम्रा उत्पादनहरूको पहुँच रहेको छ । अटोमोवाइल क्षेत्रमा लामो समयसम्म कामलाई निरन्तरता दिन सकेको खन्डमा यसको विश्वसनियता बढ्दै जान्छ । यस मामलामा हामी खरो उत्रेका छौँ । हिट्कोले नेपाली बजारमा आफ्नो विश्वनियतालाई निकै बलियो बनाएको हामीले पाएका छौँ । हामीले बनाएका नेपालका धेरै ग्यारेजहरू निकै उत्कृष्ट रहेका छन् । हामीलाई पूरा विश्वास छ, हिट्कोले नेपाली बजारमा ग्यारेज सामान सप्लाईमा निकै राम्रो गरिरहेको छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण यसका सञ्चालक प्रदीपमान प्रधानको व्यक्तिगत सम्बन्धलगायतका विषयले पनि निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
नेपालमा वार्षिक कति सङ्ख्यामा ग्यारेज निर्माण हुने गरेको छ ?
नेपालमा अटोमोवाइल सेक्टरको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । बल्ल यहाँको बजारले बिक्रीभन्दा पनि सर्भिस महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने विषय बुझ्दैछ । म अहिले यहाँ विभिन्न गाडी बिक्रेता कम्पनीसँग भेटघाटमा नै छु । सबैले आफ्नो सर्भिस सेन्टर विस्तारको योजना बनाइरहेको पाएको छु । अहिले वार्षिक १०० भन्दा बढी ग्यारेज नेपालमा खुलिरहेको छ । त्यसमा करिब ८० प्रतिशत बजार हिस्सा हाम्रो रहेको छ ।
अब झनै ग्यारेजको सङ्ख्या वृद्धि हुने देखिएको छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय सामानको सप्लाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । बजार बढाउने कोशिष हामीले जारी राखेका छौँ ।
एटस एलजीले अहिले कति देशमा आफ्ना सामान सप्लाई गर्ने गरेको छ ?
भारतबाहेक करिब ३८ देशमा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ । यी सबै देशमा हुने निर्यात मैले नै हेर्ने भएकाले यसमा मलाई बोल्न पनि निकै सजिलो छ । धेरैजसो भारतीय प्रयोगकर्ता र लगानीकर्ता भएको ठाउँमा हाम्रा उत्पादन बिक्री हुने गरेको छ । हाम्रो कम्पनी पूर्णतः भारतीय कम्पनी हो । हामीले ५५ वर्षको यात्रातय गरिसकेका छौँ । यति लामो समयदेखि हामीले आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाइरहेका छौँ भने भारतीयहरूका बीचमा हाम्रो कम्पनीको विश्वसनियता बढी हुनु स्वभाविक हो ।
म तपाईलाई एउटा घटना सुनाउन चान्छु । केही समय अगाडि युगान्डामा एउटा ग्यारेज निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएछ । त्यहाँ भारतको गुजराती समुदाय व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ उनीहरूले काम गर्न मेकानिक्सहरू भारतीय बजारबाट लगेछन् । त्यसपछि ग्यारेज सामान किन्ने छलफल हुँदा ती कामदारहरूले भारतबाट एटस एलजीकै सामान मगाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले छन् । त्यसपछि हामी युगान्डाको बजारमा प्रवेश गर्यौं । आज त्यहाँका धेरै ग्यारेजमा हाम्रा मेसिनहरू जडान भएका छन् ।
यदि दैनिक २० देखि २५ गाडीलाई सबै किसिमका सुविधासहितको सर्भिस दिने हो भने करिब ९० लाख देखि १ करोड नेपाली रुपैयाँको इक्यूपमेन्ट लाग्छ ।
मूल्यका हिसावले चिनीयाँ बजारमा उत्पादन भएका सामान सस्ता छन्, तर हामी क्वालिटीअनुसारको मूल्य बेष्ट छ । त्यसैले हाम्रा उत्पादनको माग धेरै देशमा बढी रहेको छ ।
ग्यारेज उपकरणसँग जोडिएका कति प्रडक्टहरू एटस एलजीले उत्पादन गरिरहेको छ ?
ग्यारेजमा प्रयोग हुने १०० भन्दा बढी प्रडक्ट हामी उत्पादन गर्छौं । तर, ग्यारेजमा कतिवटा प्रडक्ट भन्नुभन्दा कुन ग्रुपमा कति उत्पादनभन्दा उपयुक्त हुन्छ । लिफ्टीङ्ग, वासिङ्ग, बडीसप (क््रयास रिपिएर), लुब्रिकेटिङ्ग इक्यूप, ल्यूमेटिक टुल्स, एअर कम्प्रेसरलगायतका मुख्य उपकरण हामी बनाउँछौँ ।
एउटा राम्रो ग्यारेज खोल्नुपरेको खन्डमा आजको दिनमा कति खर्च आउँछ ?
ग्यारेजमा कुन–कुन सेवा दिने सोच छ, सोहीअनुसार खर्च लाग्ने हो । कति क्षेत्रफलमा फैलिएको र दैनिक कति सङ्ख्यामा सवारीसाधनलाई सर्भिस दिने हो भन्ने विषयले खर्चको हिसाब निर्धारण गर्छ । यदि दैनिक २० देखि २५ गाडीलाई सबै किसिमका सुविधासहितको सर्भिस दिने हो भने करिब ९० लाख देखि १ करोड नेपाली रुपैयाँको इक्यूपमेन्ट लाग्छ । यसमा मुख्यतया औजारको मात्रै खर्च आउँछ ।
भारतमा कुनै गाडी उत्पादकसँग मिलेर काम गरिरहनुभएको छ ?
भारतीय बजारमा डिलर नेटवर्कमा आधारित रहेर ग्यारेज खोल्ने गरिएको छ । त्यसका लागि गाडी उत्पादकको रेकिमेन्डेसन मुख्य विषय रहन्छ । हामी धेरैजसो गाडी उत्पादकसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।
तपाईंहरूको सामानमा वारेन्टी कस्तो रहेको छ ?
हामीले हाम्रा उत्पादनमा एक वर्षको वारेन्टी दिने गरेका छौँ । यदि वारेन्टीको समय अवधिमा मेसिनमा कुनै किसिमको समस्या आएको खन्डमा हामी आफ्नै खर्चमा त्यसको समाधान गर्नेछौँ । त्यसपछि पनि हामी वार्षिक मेन्टिनेन्स एग्रीमेन्ट गरेर काम गर्दैआएका छौँ ।
अब चर्चा इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको सुरु भएको छ । ईभीको बजार हिस्सा बढेसँगै एटस एलजीको रणनीति कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो व्यवसाय इलेक्ट्रीक सवारीसाधन आउँदा पनि खासै फरक पर्दैन । गाडी सर्भिसिङ्ग गर्नु नै पर्छ । यदि ठोकिएको खन्डमा बनाउनुपर्छ नै । गाडी धुनुपर्छ नै । यस हिसाबले हेर्दा ग्यारेजको महत्व घट्दैन । बढ्छ नै ।
अहिले गाडी किन्ने मानिस पाउनै गाह्रो छ: करण चौधरीको अन्तर्वार्ता
एउटा गाडीमा केही हजार छुट गरेर ग्राहक तान्ने हाम्रो रणनीति होइनः बरदान बस्नेतको अन्तर्वार्ता
१० लाखको रिकन्डिसन गाडी किन्नेलाई पनि विशेष सुविधा दिन्छौंः ध्रुव रेग्मीको अन्तर्वार्ता
२३ लाखमा एसयूभीको ‘फिल’ एस-प्रेसोले मात्र दिन सक्छः करण चौधरीको अन्तर्वार्ता
इलेक्ट्रीक गाडी समयको माग हो, नेपालीले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेः सुजन रोयको अन्तर्वार्ता